Ingaba diabetes kuza?-Diabetes Ithetha-Sinocare
Sifika njani iswekile?
Ixesha: 2019-08-23 hits: 85
Kuyamkeleka ngokubanzi ukuba uninzi lweeswekile ze-2 zeswekile zibangelwa yindlela yokuphila engenampilo. Ngokukodwa ngakumbi, abantu batya ngcono kwaye bazivocavoca kancinci. Ukuziphatha okunjalo kunokubangela iingxaki: Ukutya kakhulu kweekhalori akunako ukutsha kodwa kuqokelelelele emzimbeni, kuguqulwe kwiswekile, xa kukho iglucose engaphezulu egazini, incindi yomntu iya kuthi ikhusele i-insulin ngokuzenzekelayo.
Kodwa, xa i-shoplet isebenza ngokungaphezulu, abantu abayazi, badla nokutya okungaphezulu, ukuzivocavoca, ukuba izinto ziqhubeka ngolu hlobo, indawo ethengisa izinto ezinkulu, ayisafihli insulin ngakumbi xa iswekile yegazi inyuka ngokwendalo.
Iswekile yenzeka xa amanqanaba eglucose egazi enyuka aye kwinqanaba elithile.
Ukuchazwa kwimiba yonyango, isifo seswekile sisifo esingapheliyo, isifo se-metabolism glucose esibangelwa kukungabikho kwe-insulin okanye ukumelana ne-insulin, kuhamba kunye namafutha, iiprotein, amanzi kunye ne-electrolyte metabolism disorder ebonakaliswa yi-hyperglycemia engapheliyo.
Isifo seswekile, abantu banokubonakala njengeempawu “ezintathu zepoyinti kunye enye encinci” ----- ukutya ngaphezulu, ukusela ngakumbi umchamo kunye nokunciphisa umzimba. Kodwa abantu abaninzi abanazo ezi mpawu. Ke, sukucinga ukuba "ukuba nokutya" "yimeko elungileyo yomzimba".
Isihlomelo: Inkqubo yokuqonda isifo seswekile
Inkqubo yokujonga isifo
Inqanaba le glucose yeVenous Plasma (mmol / L)
Iimpawu eziqhelekileyo zesifo seswekile (polydipsia, polyuria, ukutya kakhulu, ukunciphisa umzimba) kunye nokungahleliwe
Uvavanyo lweglucose yegazi
Ukuzila ngokukhawuleza iglucose
Iiyure ze-2 ze-postprandial glucose
Akukho zimpawu zeswekile, kufuneka ziphindaphindwe
Qaphela: iswekile yokuzila igazi ibhekisa ubuncinci kwiiyure ze-8 ngaphandle kokutya kakhulu; I-glucose egazi engalungelelanwanga ithetha ngaphandle kokujonga ixesha lokutya kokugqibela kwaye ke ayinakusetyenziswa ukufumanisa ukuba i-glucose ayinyamezeleki okanye ukunyamezelwa kweswekile.
Iphepha elidlulileyo: Xa ukuzila ukutya kweglucose yegazi kungaphantsi kunesiqhelo ...
Iphepha elilandelayo: Kutheni unesifo seswekile?